MB 2016 Abriil, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Bishii la soo dhaafay, dhowr wadaad oo GCI ah ayaa ka qeyb qaatay tababar gacanta ku qaadis ah oo wacyi galinta ah, oo loogu magac daray "Waabiyada", oo ay hogaaminayeen Heber Ticas, isku duwaha guud ee Adeegga Injiilka ee Grace Communion International. Tan waxaa la sameeyay iyada oo lala kaashanayo Waddooyinka Grace, oo ka mid ah bulshooyinka ku dhow Dallas, Texas. Tababarku wuxuu ku bilaabmay casharro jimcihii wuxuuna sii waday subaxnimadii sabtida wadaadada waxay la kulmeen xubnaha kaniisada si ay albaab ugu galaan albaabka albaabka kaniisadda oo ay ku martiqaadaan dadka ka socda kaniisadda maxalliga ah maalinta carruurta ee madadaalada maalinta dambe.
Laba ka mid ah wadaaddadayada ayaa albaabka garaacay oo u sheegay ninka reerka ah in ay metelaan shirka GCI ka dibna ay xusayaan maalinta carruurta xiisaha leh. Ninkii wuxuu u sheegay inuusan rumeysanin Ilaahay maxaa yeelay Eebbe ma uusan xallin dhibaatooyinka adduunka. Halkii ay ka sii socon lahaayeen, wadaaddada kaniisadda ayaa la hadlay ninka. Waxay barteen inuu yahay theorist shirqool ah oo aaminsan in diinta ay tahay sababta dhibaatooyinka badan ee adduunka. Ninkii wuxuu la yaabay oo aad ula yaabay markii wadaadada wadaada ay qirteen inuu kahadlayo meel caqli gal ah wuxuuna farta ku fiiqay in ciise uusan sidoo kale aad uxiiseyneynin diinta. Ninkii wuxuu ku jawaabay inuu duubayo su’aalaha isla markaana raadinayo jawaabo.
Markii wadaaddadayadu dhiirigelinayeen inuu weydiiyo su'aalo dheeri ah, wuu yaabay. Wuxuu ku jawaabay, "Cidna weligaa taas iguma sheegin." Wadaad ayaa yidhi, Waxaan u malaynayaa qaabka aad wax u waydiiso inay kuu saamaxayso inaad hesho jawaabo dhab ah oo kaliya oo Ilaahay bixin karo. Qiyaastii 35 daqiiqo kadib, ninka ayaa raali gelin ka bixiyay inuu aad u xanaaqsan yahay oo uu u caayay, wuxuuna ku yiri, "wuxuu jecel yahay habka adiga, sida wadaaddada GCI, uga fakar Ilaah." Wadahadalkaasi wuxuu ku dhammaaday mid ka mid ah wadaaddadayada oo u dammaanad qaadaya isaga: "Ilaaha aan aqaan ee aan jeclahay wuu ku jecel yahay isaga oo doonaya inuu xidhiidh idinka dhexeeyo. Isaga kama walwalaa ama kama walwalay fekerkaaga shirqoolka ama nacaybka diinta. Wuu gacan qaadi doonaa gacmahaaga waqtiga saxda ah oo waad garan doontaa inuu Ilaah yahay. Waxaan u maleynayaa inaad si habboon uga jawaabi doonto. » Ninkii ayaa eegay oo yidhi, kan waa qabow. Waad ku mahadsan tahay dhageysigaada waana ku mahadsan tahay waqtiga aad igu qaadatay inaad ila hadasho. ”
Waxaan la wadaagaa aragtida sheekada dhacdadan sababta oo ah waxay sharraxaysaa run muhiima: dadka ku nool mugdiga si togan ayey saameyn ugu leeyihiin marka nuurka Masiixa si cad loo wadaago. Farqiga u dhexeeya iftiinka iyo gudcurka ayaa tusaale u ah inta badan loo adeegsado Qorniinka si loo muujiyo wanaagga (ama aqoon) shar (ama jaahil). Ciise wuxuu u adeegsaday inuu ka hadlo xukunka iyo daahirinta: «Dadka waxaa xukuma maxaa yeelay nuurka ayaa dunida yimid, laakiin waxay nuurka ka jecel yihiin iftiinka. Maxaa yeelay wax kasta oo ay sameeyaan waa shar. Ku alla kii shar falaa nuurkuu ka fogaa, oo wuxuu jecel yahay inuu gudcurka sii jiro si aan ninna u arkin dembigiisa. Laakiin ku alla kii addeeca Ilaah, nuurka ayuu ku socdaa. Ka dib waxaa soo baxday inuu noloshiisa ku noolaado si waafaqsan doonista Eebbe » (Yooxanaa 3,19: 21 rajo u leh dhammaan).
Ereyga caanka ah: "Waxaa wanaagsan in laambad shumac loo aaneeyo inkaarta gudcurka" ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah looga hadlay sanadkii 1961 Peter Benenson. Peter Benenson wuxuu ahaa qareenka Ingiriiska oo aasaasay Amnesty International. Markaa shumac ku wareegsan silig jiifa ayaa noqday astaanta bulshada (ka fiiri sawirka dhanka midig). Gudaha Rooma 13,12 (DIIWAAN DHAMMAAN) rasuul Bawlos wuxuu yiri wax la mid ah: «Mar dhow habeenku wuu dhammaan doonaa, maalinta Ilaahna waa iman doontaa. Taasi waa sababta aan u rabno in aan uga baxno shaqooyinka mugdiga ah ee habeenkii oo aan isku hallaynno hubka iftiinka. » Tani waa sax wixii labadeenaba wadaadnimo u sameeyeen nin ku nool mugdiga markii ay albaab u galeen albaabka xaafad ku taal goobta kaniisadda ee Dallas.
Waxay ku dhaqmayeen sida saxda ah ee Ciise kula hadlay xertiisii ​​ee Matayos 5: 14-16 Rajada Dadka oo dhan:
Adigu waxaad tahay nuurka dunida u iftiimiya. Magaalo sare oo buurta dusheedii ma qarsoona. Ilays ma shido laambad, daboolna ha daboosho. Taas bedelkeeda: Waxaad dhigay si ay u iftiimiso qof kasta oo guriga jooga. Sidoo kale, iftiinkaagu waa inuu ku iftiimaa dadka hortiisa. Iyagu waa inay aabahaaga jannada ku gartaan camalkaaga oo ay isaga u maamuusaan. Waxaan u maleynayaa inaan mararka qaar qushuucno awooda aan u leenahay inaan dunida si wanaagsan ugu saameynno. Waxaan u muuqanaa inaan ilaawin sida saameynta iftiinka Masiixa uu u leeyahay hal qof kaliya uu isbadal weyn ku sameyn karo. Nasiib darrose, sida ka muuqata kartoonada kor ku xusan, qaar waxay door bidaan inkaarta gudcurka in ka badan iftiinka. Qaarkood waxay xooga saaraan dembiga intii ay la wadaagi lahaayeen jacaylka iyo nimcada Eebbe.
In kasta oo mugdigu mararka qaar inaga dulqaadan karno, haddana weligeed ma dabooli karto Ilaah. Waa inaanan waligeen ogolaan cabsi ka qabta xumaanta adduunka maxaa yeelay waxay noo horseedda inaanan eegin qofka Ciise yahay, waxa uu nagu sameeyey, iyo waxa naloo sheegay in aan sameyno. Xusuusnow wuxuu noo ballanqaadayaa in gudcurka uusan iftiinka ka adkaan karin. Xitaa haddii aan dareemno sida shumac aad u yar oo dhexda dhex gala mugdiga, xataa shumac yar ayaa wali bixiya nalal iyo kuleyl. Xitaa qaab yar oo muuqata, waxaan ka tarjumaynaa iftiinka adduunka, Ciise. Xitaa fursadaha yar yar waligood faa iido ma leh.
Ciise waa iftiinka dhammaan waxyaabaha la isku qurxiyo ee aan ahayn kaniisadda oo keliya. Wuxuu ka qaadaa dembiga dunida mana aha oo keliya kuwa rumaystayaasha ah. Awooda Ruuxa Quduuska ah, xagga Ciise Aabbaha wuxuu nagaga soo bixiyey gudcurka xagga iftiinka cilaaqaadka nolosha siiya kan saddex geesoodka ah ee Eebbe ballan qaaday inuusan waligiis naga tegi doonin. Taasi waa warka wanaagsan (injiilka) laxiriirta qofkasta oo dunidan jooga. Ciise wuxuu la jaan qaada dadka oo dhan, ha yaqaanaan ama yaanay aqoon. Labadii wadaad ee la hadlayey diin laaweyaasha waxay ogaadeen inuu yahay wiil Ilaah jecel, oo nasiib xumo weli ku nool gudcurka. Laakiin halkii lagu habaari lahaa mugdiga (ama ninku!), wadaaddada kaniisadda ayaa doorbiday inay raacaan hagida Ruuxa Quduuska ah si ay u keenaan warka wanaagsan adduunka gudcurka ku jira, oo ah dhammaystirka waajibaadka Aabaha, iyo Ciise. Sida carruurta iftiinka (1 Tesaloniika 5, 5), waxay diyaar u ahaayeen inay ahaadaan kuwa iftiinka wata.
Dhacdadan "Hortooda darbiyada" ayaa sii socday Axaddii. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa si togan uga jawaabay martiqaadka waxayna booqdeen kaniisaddeenna. In kasta oo dhowr ay yimaadeen, haddana ninkii labada wadaaddada la hadlay ma uusan imaan. Uma badna inuu ka dhex muuqan doono kaniisada mustaqbalka. Laakiin imaatinka kaniisadda ma ahayn ujeeddada wada-hadalka. Ninka waxaa lasiiyay wax uu ka fikiro, si uu ugu hadlo abuur ayaa lagu beeray maskaxdiisa iyo qalbigiisa. Waxaa laga yaabaa in xidhiidh ka dhexeeyey isaga iyo Ilaah uu sii socon doono. Maxaa yeelay ninkanu wuxuu yahay wiilkii Ilaah, waxaynu rumeysan nahay inuu Ilaah kusii wadi doono iftiinka Masiixa isaga. Wadooyinka nimcada waxay u badan tahay inay la wadaagaan waxa Ilaah ku sameeyo nolosha ninkan.
Midkeen kasta ha raaco ruuxa Masiixa si aan ula wadaagno iftiinka Ilaah dadka kale. Markii aan ku sii barbaarno xiriirka qoto dheer ee aan la leenahay Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa, waxaan had iyo goor dhalaalayaa iftiinka nolosha ee Ilaahay. Tani waxay quseysaa shaqsi ahaan iyo sidoo kale bulshada. Waxaan ilaahay ka baryayaa in golaheena firfircoon ee saameynta "darbiyadahooda ka baxsan" ay dhalaalaan xitaa dhalaalaan oo u oggolaadaan ruuxa noloshooda masiixiga ku soo qulqulaya. Sida aan ugu soo dari karno dadka kale jirkeena anagoo ku siineyna jacaylka Ilaahay qaab kasta oo suurogal ah, mugdigu wuxuu bilaabmayaa inuu baaba'o kaniisadahayaguna waxay ka tarjumayaan iftiinka Masiixa si aad iyo aad u badan.
Iftiinka Masiixu ha idin iftiimiyo